ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳလိင်ဂိမ်းများအပေါ်ရေနွေးငွေ့:အသာချာသင်လိုအပ်မှစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆိုရင်အကြောစားသောအနာနှင့်ငြီးနိုင်ဖြစ်ခြင်းမနှင့်အရည်အသွေးကောင်းကိုရှာဖွေ XXX ဖြန့်ချိ။ သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ကောင်းပြောပြမှအမည်၊ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းအပေါ်အာရုံစိုက်ခံရတဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ရောက်မည်သူမဆိုများအတွက်နှင့်ဖို့လိုလားကြောင်းလူတိုင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အများကြီးအပြာကားထုတ်လုပ်သောသူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုမတှေ့လိမျ့မညျ။ စဉ်ရေနွေးငွေ့ရှိစေခြင်းငှါအနည်းငယ်အပိုင်းပိုင်းၡမ်ားအကြောင်းဒီမှာရှိတယ်၊အမျိုးအစားများကျွန်တော်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ခြင်းသည်မလျောက်ပတ်သည်အဘယျသို့သူတို့လိုချင်တဲ့မိမိတို့စီမံကိန်းအဖြစ်နှင့်ပတ်သက်။, အဆင်ပြေပါတယ်–ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သွားနေတာပါသေချာအောင်ကြောင်းမည်သည့်အစားသူစိတ်ဝင်စားသွားပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်ကထက်အနိုင်ပြုမှတိတိကျကျမရှိဘဲမည်သည့်ကိစ္စရပ်များကိုသို့မဟုတ်ပြဿနာများ။ ဘယ်လိုဖြစ်လိင်ဂိမ်းများအပေါ်ရေနွေးငွေ့ယူပြီးစီးပွားလာမယ့်အဆင့်အထိ? ရိုးရှင်းသောအဖြေမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ပြီးပြချင်ကြောင်းလူတိုင်းနှင့်အတူလုံလောက်တဲ့အချိန်၊အားထုတ်မှုနှင့်စွမ်းအင်၊သင်အောင်မြင်အချို့အမှန်တကယ်အလွန်ကြီးစွာသောအမှုအရာမှကြွလာသောအခါအပြာအွန်လိုင်း။, ဒါကြောင့်နဲ့တူခံစားရလျှင်သင်တို့၏အချိန်ဖြုန်းနှင့်အတူပလက်ဖောင်းသိအမွတ္သားျခင္းသူတို့၏လုပ်ငန်းကဲ့သို့အခြား၊ရကုန်မှဆင်းနှင့်လက်မှာအလုပ်တစ်ခုကိုအဘယ်အရာကိုမြင်လိင်ဂိမ်းများအပေါ်ရေနွေးငွေ့အားလုံးအကြောင်းပါ။ လာမယ့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျေးဇူးပြုပြီး–သေချာအောင်သင်မွေ့လျော်ဂိမ်းအဖြစ်တာသင်လုပ်နိုင်အဖြစ်–အဘယျသို့သူတို့ဒီမှာနေများအတွက်!
အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတတ်နိုင်သမျှအစေငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်တစ်ခုလုံးကိုပလက်ဖောင်းမှာလုံးဝအခမဲ့ကစားရန်။ ဤထားရန်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်၊သင်ဖို့လိုအပ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ပေးဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုက်ဆံမှာလိင်ဂိမ်းရေနွေးငွေ့အပေါ်ခံစားဖို့အဆိုကို၏ဂိမ်းများရှိသည်၊မဟုတ်သူတို့ကိုပြီးစီးခြင်းဒါမှမဟုတ်အရတစ်ခုလုံးကိုဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံတွေရရှိလာဖို့မျှော်လင့်။ ဤသူကားအသက်သက်အခမဲ့ကစားရန်ရှိရာပလက်ဖောင်းလွှဲပြောင်းငွေပေးစေခြင်းငှါအလျှင်းသင်အားသာချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အရာအားလုံး၏အမျိုးအ။, ကျွန်တော်တို့ခိုင်၏အကြောင်းယုံကြည်သွားနေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုလုပ်အခမဲ့ကစားရန်၊သငျသညျမဖြစ်သင့်ကြိုးစားနေအစားအများထဲကငွေရှာတဲ့သူကလူတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အဘယ်သို့ထွက်စစ်ဆေးသည်သင်တယ်။ လက်ရှိအခြေအနေအရပျ၌အစနစ်ဖို့ခွင့်ပြုသောအထောက်အကူအဖွဲ့နှင့်အတူအနည်းငယ်ထုပ်ဝယ်ယူ၊ဒါပေမဲ့ဒီလုံးဝကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးအစေခံမည်မဟုတ်သင်ကောင်း၊သို့မဟုတ်နောက်ထပ်တိုး၊မည်သည့်ဂိမ်းကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။ ကျနော်တို့တင်းကြပ်စွာဆန့်ကျင်သောအမျိုးအစားများ၏ရာနှင့်အင်း–ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းလိင်ဂိမ်းရေနွေးငွေ့အပေါ်ဖြစ်ခြင်းအခမဲ့ဟိုလက်ျာရွေးချယ်မှုကိုလုပ်။
သောကြောင့်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုမိမိတံဆိပ်ကပ်ပြီးနောက်ရေနွေးငွေ့များ၊အဖွဲ့အသွားအလာဖန်တီးရေအတွက်ဂိမ်းသင်တို့အဘို့ကစားရန်ဒါကြောင့်ပင်မဟုတ်ဆိုရင်လုံးဝသတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်အမျိုးအစား၊အဲဒါတွေအများကြီးတစ်ငရဲ၏ရွေးချယ်မှုများဖွင့်ဖို့။ ထိုအချိန်ကအရေးအသား၏ဤစာသား၊အဆိုပါဒေတာဘေ့စဒီချပ်များကျော် ၁၃၅ ဂိမ်းများ၊အားလုံးအရာ၏ဖန္တီးငါတို့အားဖြင့်သီးသန့်ထုတ်ဝေဒီနေရာမှာငါတို့အားဖြင့်။ ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့အရာအတိျ၊ချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကမည်သူမဆိုယုံကြည်ရန်တစ်စက္ကန့်အဘို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ယူပြီးပစ္စည်းမှအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အချကဒီမှာ။, လိင်ဂိမ်းရေနွေးငွေ့အပေါ်အကြောင်းပေးခြင်းအားအကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးနှင့်အဓိပ္ပါယ်မထောင့်ဖြတ်တောက်အဖြစ်–ငါတို့သည်သင်တို့ chuffed ငရဲအဖြစ်ရောက်စေဖို့သင်၏မုန့်အနှံချင်ကြပါဘူးဖို့မည်သူမဆိုဆင်းရဲဘဲအမျိုးအစားများ၏ညစ်ညမ်းသောသူတို့ကိုရရှိသွားတဲ့ပူအောက်မှာကော်လာ။ နောက်ဆုံးသောအရာသင်လိုအပ်နေစဉ်တွင်နေထိုင်လျက်ရှိ၏င၏လက်မှနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းထွက်ကြိုဂိမ်းတစ်ခုအမှန်တကယ်ကြည့်ပြီးအရည်ရွှမ်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ။, ဂိမ်းကစားနှင့်အတူတစ်ဦးစိုက်ထူရမည်ဖြစ်ပြုံးကနေမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခင်းကျင်း၏ရွေးချယ်မှုကြောင်းသိရသည်ကျော်သူတို့အပေါ်မှာ–မငိုသောကြောင့်၊သူတို့အမျိုးအစားများ၏နယ်ပယ်မဟုတ်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်ညမ်းဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်းကသူတို့ကကိုယ့်အဘို့ဖွင့်လက်မှတ်ရေးထိုး!
ခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာ၊အထူးချွန်ဆုံးသောအရာလုပျနိုငျအခုအချိန်မှာကိုယ့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပြီးမြင်ဖြစ်စေမလိင်ဂိမ်းများအပေါ်ရေနွေးငွေ့၏အမျိုးအစားသင်တို့အဘို့အရပျ။ ခဲ့ပြီးပြီဆိုပါကထိုသို့ရွှေ့ဆိုင်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်အကြောင်းတစ်ခုခုရှာဖွေတောင်မှပိုကောင်းမယ့်၊ဒါဟာဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံးသင်၏အချိန်မဖြုန်းတီးသောကြောင့်၊ဖြစ်စွာသင်တို့နှင့်အတူရိုးသားသော၊ကျနော်တို့ပြုသုတေသနနှင့်သင်ပြောပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးသံသယအရိပ်သောလိင်ဂိမ်းများအပေါ်ရေနွေးငွေ့အတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခုအချိန်မှာ။, ပြောင်းလဲစေမည်အကြောင်းအနာဂတ်အတွက်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အတူယုံကြည်စိတ်ချနေ shilling ကိုယ်ကိုယ်အဘို့နှင့်သောသင်ပြောပြတာသွားအတွက်ဖြစ်ဖို့အတွက်နာကျင်မှုကိုမကျင့်လျှင်သင်ကောက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့သွား-မှအစက်အပြောက်များအတွက်နေ့စဉ်အ wanking။ Anyhow၊စာဖတ်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်–သင်၏အချိန်အပေါ်အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အတွင်းမကြာမီ!